Digtoonida Muuse, Dagaalka Djibouti, Duullaanka Farmaajo, Dulsaarka amxaarka | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Digtoonida Muuse, Dagaalka Djibouti, Duullaanka Farmaajo, Dulsaarka amxaarka
Cigaal ku dahaadhay
Ka weyn dubay woole (Dubai world).
Qoraal badan odhan maayo, waayo dadkayga iyo xukuumadda Somaliland waxay la socdeen beryahan dagaalka dhinacyada badan leh ee lagu wada socda dalkana lagu soo qaaday. Taas oo u baahan in farsamo iyo si xikmadaysa loo waajaho fursadahana looga faa’iidaysto. Waayo mar la arag aad qaali ah oo aan Somaliland dib u soo mari doonin.
Maadaama intaasi jirto waxaan halkan ku soo gudbinaya qodobo tallooyin ah iyo inyar oo jacbur suugaaneed ah oo aan dabdhah uga dhigayo.
1- Dagaalka Djibouti wado waa mid dhaqaale, waxayna geed dheer iyo geed gaaban u fuulaysaa in somaliland la burburiyo, waxana tusaale kuugu filan colaadda ay toddobaadkan ka ridi doonto xudduudaha Somaliland iyo Soomaaliya , gaar ahaan dhinaca Puntland oo ay kula talisay inay dagaal bilaabaan, Farmaajona taageero.
2- Mooshinka ka socda baarlamaanka Muqdisho ee uu hagayo Guddoomiye ku xigeenka Jawaari ee uu magacowday Ina Cumar Geele. Kaas oo fulinaya danaha Djibouti oo lala kaashanayo, Turkey iyo Qatar dhaqaale ahaan.
3- Danaysiga Itoobiya oo danteedu ka fogtahay mid saami ay ku yeelato Dekeda Berbera uun ee hadhoowto arinteeda meel fog laga dooni doono. Haddaynaan si farsamo ah uga siibanin oo aynaan u dhigin. Si hadhoow la isaga difaaci karo sharci ahaan waa inay ku dhawaaqdaa citiraafka Somaliland, hadday nasteexo jirto ay dal ahaan inoo hayso.
4- DP WORLD iyo dawlada Emarites hadday dhab ka tahay inay dano dhaqaale doonayaan, si ay taasi u hirgasho waa in ay si degdega u citiraafaan Somaliland, si heshiiska sawirka ugu weyn ee la dhaafsanayaa taas u noqdo.
5- Madaxwayne adiga iyo xukuumadaadu xigmad wayn oo aynu fursadan qaaliga ah kaga faa’iidaysano ayaa lagaaga fadhiyaaye, la yimaada.
6- Xisbiyada mucaaradka ah waxaa looga baahan yahay marka ay taagan tahay danta qaranka inay ku dabo faylaan xukuumadooda, taas oo aan ahayn inay wax walba ku raacaan laakiin waa inay la yimaadaan toosin caafimaad qabta sida tan aan imika wado oo kale.
Suugaantan Jacburka ahna ila wadaaga.
Horaan ugu doortay
Haddeerna ma diidin
Midh baase digniin ah
Aan daaha ka qaado.
Horaan dirir baasta
Duruus uga qaatay
Dir bay shalay eeday.
Dibnaa warka dhaafay
Dammiin ma ahayne
Ninkii dirtay mooyi.
Ka dheer dulucdiisu
Halkuu ku deyayaayo
Dibaa mari doona.
Qadayn iyo doolar
Dib aynu u eedno
Dab baa ka holcaaya.
Amiirrada duubka ,
Cigaal ku dahaadhay,
Dammiir uma noola
Dun kii la wadaagay
Dabkaa ka holcaaya
Ciraaq ma dunsheene
Sancaaba ku daysay
Bal Suuriya daawo.
Dalkoo citiraaf leh
Haddaan lagu duugin,
Dayuurad ku raacin
Dammaanad ma hayno,
Dadkaygu ma qaato.